Fampiharana fanafanana lohataona induction miaraka amin'ny heater induction hafanana
Fitaovana ho an'ny Induction hardening lohataona manana endrika helikety na tantely. Ny fitaovana dia manana rafitra fanohanana fihodinana ary rafitra fanafana fampidirana. Ny rafi-panohanana fihodinana dia natao hanohanana ny lohataona raha ny lohataona kosa nofanain'ny rafitra fanamorana fampidirana. ny rafitra fanamorana ny induction manana rafitra coil fampidirana izay manana rafitra coil. Ny rafitra coil dia manana faritra misy elanelana natao mba handraisana lohataona sy hanafana ny lohataona raha ny lohataona kosa dia tohanan'ny rafitra fanohanana fihodinana.
Ny loharano coil na lohataona ravina dia vita amin'ny alàlan'ny fiovan'ny toetr'andro ny profil vy. Noho ny toetra mampiavaka ny vy amin'ny lohataona dia misy fepetra takiana amin'ny hafanana sy ny fotoana fanafanana mandritra ny fizotran'ny fanafanana. Afa-tsy ny preheating alohan'ny hidirana amin'ny coil lohataona na ny fanodinana press amin'ny loharano ravina, misy ihany koa ny fangatahana fitsaboana hafanana samihafa, toy ny fanamafisam-peo tariby, sy ny fanamafisana ny tontolon'ny vy. Manana ny mampiavaka ny hafanana haingana, mihidy haingana, mifehy ny famoahana herinaratra marina ary miovaova ny elanelan'ny hatetika, ny HLQ's induction heating power supply dia tena mety amin'ny fanamainana hafanana ny vy amin'ny lohataona, indrindra amin'ny indostrian'ny faritra misy ny loharano ravina na zavamaniry mpamokatra lohataona mitondra entana. Namboarin'ny matihanina ao amin'ny HLQ, ny fitaovana fanamafisana induction dia ampy fitaovana tsara avokoa amin'ny tombony azo avy amin'ny fitsitsiana angovo, fanombohana / fijanonana haingana, fotoana fandehanana adiny 24 ora, tondro avo, automatique avo lenta, fahaiza-miasa be, fikojakojana mora ary fiainana maharitra. Ireo heaterinay fampidirana dia fantatry ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny famokarana vy amin'ny lohataona.
Ny fizotran'ny fanamafisana vy dia dingana mahazatra ampiasaina amin'ny famoronana lohataona. Ny dingana fanamafisana iraisana iray dia ny lafaoro nentim-paharazana. Ny fizotran'ny fanamafisana toy izany dia miadana be. Ny Springs dia azo noforonina tamin'ny metaly isan-karazany (oh: vy vy, vy karbaona, vy vita amin'ny firaka, sns.). Rehefa nohamafisina tsara ny metaly tamin'ny lohataona, dia azo trandrahana ireo metalyurgika manokana toy ny hamaf sy ny rafitra bitika.
Rehefa manamafy ny lohataona ny lohataona, dia apetraka ao anaty lafaoro eo amin'ny mari-pana iray ny lohataona mandritra ny fotoana iray. Aorian'izay dia esorina ny lohataona ary hofongorana amin'ny diloilo na ranon-javatra famonoana hafa. Aorian'ity fizotran'ny fanamafisana voalohany ity, ny hamafin'ny lohataona amin'ny ankapobeny dia avo kokoa noho ny tiana. Araka izany, ny lohataona dia iharan'ny fizotrany mandra-pahazoan'ny lohataona ireo toetra ara-batana tadiavina. Rehefa voalamina tsara ny lohataona, ny sasany amin'ireo firafitry ny vy amin'ny vy dia novaina ho martensite voakolokolo miaraka amin'ny ankamaroan'ny karbida nesorina mba hanomezana ny firafitry ny lohataona sy ny hamafin'ny ambonin'ny lohataona.
Dingana iray hafa izay ampiasaina amin'ny loharano manamafy ny induction heating. Ny fizotran'ny fanafanana fampidirana dia mitranga amin'ny alàlan'ny fampidirana saha elektromagnetika amin'ny fitaovana fitarihan-doha amin'ny lohataona. Ny onja Eddy dia miteraka ao anatin'ny fitaovam-pitondra-tena izay mitarika amin'ny fanafanana Joule. Ny fanamafisana induction dia azo ampiasaina hanamafisana ny vy amin'ny toerany raha toa ka ilaina izay mihoatra ny ampy hanefena ny vokatra.
Ny fizotran'ny fanafanana fampidirana dia afaka manome fotoana maharitra haingana kokoa noho ny fanafanana amin'ny lafaoro nentim-paharazana, ary ny fizotran'ny fanafanana fampidirana dia afaka manamora ny fikirakirana ny loharano, ary mety hahafahan'ny automating ny fikirakirana ny lohataona amin'ny fizotrany manamafy. Na dia manana tombony maro aza ny fanamafisana induction noho ny lafaoro nentin-drazana, ny fanamafisana ny loharano fampidirana dia manana olana amin'ny fanamafisana ny lohataona mandritra ny halavan'ny lohataona, ny hafanana amin'ny faran'ny lohataona ary ny fikojakojana ny Indonezianina fanalefahana fahombiazana.
Sokajy Technologies Tags mividiana heater amin'ny lohataona induction, fanamafisana ny lohataona, fitaovana fanamafisana induction, ny lohataona famokarana induction, fanamafisana lohataona fampidirana, fanafanana lohataona fampidirana, fanamainana lohataona fampidirana, heater amin'ny lohataona vy, manamafy lohataona, fanafanana lohataona, lohataona mihamafy Post Fikarohana